नेपाल आज | कुनैपनि बेला फोरमले सरकार छोड्न सक्ने, बिप्लव र सीके प्रकरणमा फरक मत
कुनैपनि बेला फोरमले सरकार छोड्न सक्ने, बिप्लव र सीके प्रकरणमा फरक मत
एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण विवादमा परेकाबेला सरकारलाई सत्ताघटक संघीय समाजवादी फोरमले कुनैपनि बेला सरकार छोड्न सक्ने जनाउ दिएको छ । सरकारको गति अपेक्षाकृत नभएको भन्दै यसअघि सरकारलाई सचेत गराइसकेको फोरमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।
फोरमका सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सीके राउतसंगको सम्झौता र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने बिषयमा सत्ताघटक दलहरुबीच कुनै छलफल पनि भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर पार्टी र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गर्ने कुरा त छोडौं आफनै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुलाई समेत थाहै नदिइ यस्तो निर्णय गरे । आफनो पार्टी सरकारको मुख्य साझेदार भएपनि आफूहरुसंग छलफलसम्म नगर्नुले आफूहरुले चकित परेको उनी बताउँछन् ।
बिप्लवसंग राजनीतिक व्यवहार गर
बिप्लव नेकपाको समस्या दुई तरिकाले हल गर्न सकिन्छ । सो पार्टीका गतिविधि कानुन बिपरित छन् भने सम्बन्धित कानुन अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ । अन्यथा, राजनीतिक समूहसंग राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ ।
‘बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई दमनबाट होइन राजनीतिक व्यवहारबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको लाइन हो । ’ श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बिप्लवले पनि बिध्वंस मच्चाएर मुलुक बनाउँछु भन्ने सोच्न हुँदैन । यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन ।
मधेशवाद छोडे राजपासंग एकता
संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्रिय नभई राष्ट्रिय पार्टी भएकाले सिद्धान्त र कार्यनीतिका आधारमा जो सुकै पार्टीसंग एकता गर्न तयार छ । एकताको नीति अनुसार बिभिन्न पार्टीसंग एकता भैसकेको र अब राजपासंग पनि एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
राजपा र फोरमका माग र मुद्दा लगभग एउटै भएकाले एकताका लागि कुनै समस्या नहुने श्रेष्ठको बिश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘ सिद्धान्तका बिषयमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । सरकार छोडेपछि मात्र एकता गर्छु भन्ने शर्त राजपाले राख्न हुँदैन । हामी त कुनैपनि बेला सरकार छोड्न सक्छौं, यति उति दिन भन्ने गणित छैन । ’
अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, के को समृद्धि ?
मुलुकको आर्थिक अवस्था दैनिक बिग्रिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जतिसुकै ठूला आश्वासन बाँडेपनि तथ्याङ्कले निराशा मात्र देखाएको श्रेष्ठको तर्क छ ।
कुनैपनि बेला मुलुकको आर्थिक क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड नदिएसम्म सुधार नहुने धारणा राखे ।
‘आर्थिक सूचांकहरु डरलाग्दो गरी नकारात्मक दिशामा गैरहेकाबेला के को रेल र पानी जहाज ?’ श्रेष्ठ व्यंग्य गर्छन् ।